Dhageeyso,,Ciidamada booliska beydhabo oo goob fagaaro ah ku gubey jaad lasoo galiyey magaalada, – Radio Baidoa
Dhageeyso,,Ciidamada booliska beydhabo oo goob fagaaro ah ku gubey jaad lasoo galiyey magaalada,
By Webmaster	 Last updated Apr 11, 2020
Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada Baydhabo, ee xarunta gobolka baay, ayaa howlgal ay sameeyeen waxay ku soo qabteen jaad si dhuumaaleysi ah lagu soo galiyey magaalada beydhabo.
Qaadkaan ayaa lagu soo qabtey baraha kontarool ee lagu soo galo magaalada xili saraakiisha lagu amrey inay ka canta kusoo dhigaan jaadka sharcidarada ah ee lasoo galiyo magaalada beydhabo ee xarunta gobolka bay.
Gudoomiyaha Degmada ahna Duqa magaaladda Baydhabo Xasan Macalin Axmed Biikole., oo kamid ah Guddiga ka hortagga Xanuunka COVID-19 ee Koonfur Galbeed oo warbaahinta kulahadalay goobta lagu gubayey jaadka ayaa shacabka beydhabo uga digey inay jabiyaan amarka dowlada ay soo saartey ,isagoona sidookale amaan ujeediyey ciidamaadii holwlgalka smaeeyey gacantana kusoo dhigey jaadkaan wax uuna ku boqaaadiyey inay laba jibaaraan howsha ay wadaan.
Dhawaan ayey aheyd markii gudiga kahortaga cudurka coronavirus ee koonfur galbeed iyo laamaha amniga ay soo saareen amar lagu joojinayo jaadka sharci darada ah lasoo galiyo magaalada iyo sare ukaca badeecada magaalada beydhabo. iyadoona maanta sarkiisha ciidamada ay gubeen markii ugu horeysey jaad si sharci daro ah lagu soo galiyey magaalada beydhabo ee xarunta gobolka bay.
Jaad si dhuumaalays baydhawa lagu soo giliyay Ayaa lagu gubay magaalada Bayd…
Magaalada New York Tiradda dadka uu soo ritay Corona Virus oo gaartay 1.7 milyan.